Hauna kuona here menduru weMoyo Wemwedzi Dambudziko? Maitiro ekuzvigadzirisa | Ndinobva mac
Hauna kuona here menduru weMoyo Wemwedzi Dambudziko? Aya ndiwo marongero ainoita
Vashandisi veApple Watch vakatora iyo Moyo Wemwedzi Dambudziko vanogona kunge vasina menduru mune yavo yekuvharira mubairo uye izvi zvinoita kunge kukanganisa kwese. Izvi hazvireve kuti ivo havasati vawana chinetso kure nacho, kungoti hachina kuratidzwa uye nhasi tichaona maitiro ekuti chioneke.
Mune ino kesi, izvo isu zvatakaona ndezvekuti zviuru zvevashandisi havasi kuona menduru pawachi yavo uye kana paiyo iPhone, saka kuongorora zvishoma nezvenyaya yatakaziva kuti mhinduro yekuti kubudirira kwedu kuite sekuratidzwa kuri nyore Chero bedzi iwe sezviri pachena waiita chiitiko ichi, chokwadika.
Kutanga kwenguva yakakodzera kunogamuchirwa ...
Kuti izvi zvibudirire kuratidzwa mubhokisi rako remenduru mukati meFitness app iwe yaunofanirwa ita reset reApple Watch. Naizvozvi, menduru ichaonekwa pawachi yako uye unogona ikozvino kushandisa zvitambi mune yeMessage application kana mamwe ese mameseji maapplication.
Handisati ndambosangana nemamiriro ezvinhu aya uye zvinoita sekunge kwaive kukundikana kwakapararira. Nezuro waFebruary 14 uye vashandisi vazhinji vakatora dambudziko reMwedzi weMoyo nekudzidzira kuita zvekuita zvemuviri kwemaminitsi makumi matanhatu kana kudarika kuzadzisa chinangwa ichi. Nhasi uno vazhinji vanga vachishamisika chikonzero nei vachiri kuona dambudziko iri richiratidzwa uye ikozvino nekumisazve wachi kwazviri kuoneka. Ini pachangu Handisati ndambosangana nedambudziko iri kare asi kumisikidza panguva yakakodzera zvishandiso zvinogara zvakanaka ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Hauna kuona here menduru weMoyo Wemwedzi Dambudziko? Aya ndiwo marongero ainoita
Bvunzo remubvunzo rakazadzwa naSteve Jobs rinokwira kumusika